बाढीमा सयभन्दा बढीको मृत्यु – Sourya Online
बाढीमा सयभन्दा बढीको मृत्यु
सौर्य अनलाइन २०६९ असार १५ गते ३:०५ मा प्रकाशित
चटगाउँ, १५ असार । बंगलादेशमा सुरु भएको मनसुनी वर्षाका कारण बाढी आउँदा मृत्यु हुनेको संख्या एक सय नाघेको छ । तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण बिहीबार बिहानसम्म एक सयभन्दा बढीको ज्यान गएको जानकारी स्थानीय सुरक्षा अधिकारीले दिएका छन् ।
बंगलादेशको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र चटगाउँमा यस्तो विनाशकारी बाढी आएको हो । अन्य छिमेकी गाउँमा पनि बाढीको प्रकोप देखिएको छ । अविरल वर्षाका कारण सो क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पहिरो गएको र त्यसमा परी कयौँ नागरिक हराएको बताइएको छ । सरकारले बाढीपहिरो पीडितको उद्धारका लागि सेना र प्रहरी खटाएको छ । निरन्तर भारी वर्षा र बाढीका कारण उद्धार प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
चटगाउँ क्षेत्रका प्रमुख प्रशासक सिराजुल हक खानका अनुसार जिल्लाको कोक्स बजारमा पहिरो जाँदा मृत्यु भएका ४० जनाको शव प्राप्त भएको छ । बन्दरबनका प्रशासक तारिकुल इस्लामले पहिरोमा पुरिएका एक सय दुईजनाको शव प्राप्त भएको जानकारी दिए । मृत्यु हुनेमध्ये १० जना बालबालिका रहेको बताइएको छ । हराइरहेकाको खोजी भइरहेको छ । बन्दरबनका प्रहरी प्रमुख साइफुल अहमदले पहिरोले घरमा सुतिरहेका एकै परिवारका १२ जनाको मृत्यु भएको छ । (एएफपी)
जापानमा फेरि विदेशीलाई प्रवेशमा निषेध गर्ने तयारी
युएईमा ब्यापक कानुनी सुधार
ल्यान्डिङ गियरमा लुकेर ग्वाटेमालाबाट अमेरिका
नयाँ भेरियन्ट भित्रिन नदिन भारतको उच्च सतर्कता
बेलायती सांसदले संसद शत्रमै गराइन् स्तनपान
कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको नाम ‘ओमिक्रोन’
१० सचिवको सरुवा, को कहाँ ? (सुचीसहित)
स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको निर्देशनपछि गंगालालमा पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाइयो
ओलीको सूचीमा नपरेका चार केन्द्रीय सदस्य निर्विरोध
एमाले महाधिवेशन : ३०१ पदमा ३३३ जनाको उम्मेदवारी
लमजुङमा भूकम्पको धक्का महसुस
कांग्रेस वडा अधिवेशन : सर्लाहीमा झडप हुँदा निर्वाचन अधिकृतसहित ६ घाइते
खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा टंकलाल घिसिङ नियुक्त
कांग्रेस वाग्मती प्रदेशमा घिमिरे र प्रधानको प्रतिस्पर्धा
एमाले उपाध्यक्षमा कसले हार्ला ?
अब शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले विश्राम लिनुपर्छ : गगन थापा
एमाले महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रहरीका एआईजी र डीआईजीले सुरक्षा दिने
लिडरमा हुनुपर्ने योग्यता